Iwo Akanyanya Kuputira Anowanikwa eAmazon Kindle | MaReaders ese
Mhando yeAmazon angangove akabudirira kwazvo maReaders pamusika. Ivo vakakwanisa kuhwina pamusoro pemamirioni evashandisi pamusoro pemakore. Izvo zvekuti kune akatiwandei mafomati, ayo anopa mukana wekusarudza, mutengo wayo unodhura uye bhuku hombe remabhuku anowanikwa kuAmazon ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvekubudirira kwayo. Vazhinji vashandisi vanobheja pane imwe, iyo zvinoita kuti zvidikanwe kuti vatengewo kavha.
Sezvo pfungwa iri yekuti tinotora Kindle yedu patinoenda parwendo kana tichienda kubasa, kuverenga tichienda. Saka kutenga kavha chinhu chakakosha. Kubva nenzira iyi isu tichaenda kuichengetedza kubva kumabhuru uye kudzivirira guruva kubva kuunganidzwa.
Ipapo isu tinokusiya iwe nhevedzano yemabutiro e Kindle izvo zvichave zvechokwadi zvinokufadza iwe. Kune zvifukidzo zveimwe neimwe yemamodeli atinogona kuwana nhasi. Asi isu tichajekesa mune yega yega zvigadzirwa izvo saizi kana modhi yakati butiro yakagadzirirwa. Wagadzirira kusangana nemamodeli aya?
1 Moko Kindle Oasis Nyaya (9 Chizvarwa, 2017 Kuburitswa)
2 Inodzivirira Nyaya yeMhando (7th Generation - 2014 Model)
3 Kindle Paperwhite Kesi
4 Amazon Kindle Paperwhite Kesi
5 Fintie Nyaya yeMhando Oasis 2017
6 PIXNOR Nyaya yeAmazon Kindle Paperwhite
7 Inodzivirira Nyaya yeMhando (8th Generation - 2016 Model)
Moko Nyaya Kindle Oasis (9 Chizvarwa, 2017 Kuburitswa)
Isu tinotanga neiyi yepakutanga uye yehunyanzvi kesi yeiyo Kindle Oasis yechizvarwa chechipfumbamwe, mune yayo vhezheni ya2017. Iyi inyaya inomira kuve nemufananidzo wakakurumbira naVan Gogh, «Iyo Nyeredzi Husiku». Saka ndicho chifukidziro chakasiyana chinobuda kunze kweyakajairika mavara akapfava. Iyi kadhi ine kavha yakaoma inodzivirira chishandiso nguva dzese. Izvo zvinopesana nekuvhunduka uye nemhando dzese dzevhu. Saka kuti eReader yedu igare yakachengeteka uye ichidzivirirwa.
Uye zvakare, ine yekuvhura pazasi iyo inotibvumidza kubhadharisa chishandiso kana kuibatanidza kune komputa pasina kubvisa kesi. Yakagadzirirwawo kuti tikwanise kunyatsoverenga kana kushanda nguva dzese tisingabvisise. Iyi kesi iripo parizvino pa mutengo we 15,99 euros paAmazon.
Inodzivirira Nyaya yeMhando (7th Generation - 2014 Model)
Chechipiri, tinowana imwe yechinyakare uye yakasarudzika sarudzo. Iyo yakapusa, yakanyatsogadzirwa uye inoshanda chaizvo nhema nhema Kindle kesi. Iyi yakanaka imwe nzira kune avo vari kutsvaga chimwe chinhu chakangwara uye pamusoro pezvose zvinoshanda. Tiri kutarisana nenyaya yakagadzirirwa chizvarwa chechinomwe cheMhando, yakatangwa muna2014.
Iyo kesi inopokana iyo inodzivirira iyo eReader kubva kumabhomba uye kukwenya nguva dzese. Uye zvakare, dhizaini yayo yakagadzirirwa kuti isu tigone kuverenga neruoko rumwe tichiishandisa. Saka hazvisi kuzogumbura chero nguva. Pazasi penyaya yacho pane kuvhura, uko kunofumura iyo USB, kuti tikwanise kuichaja kana kuibatanidza kune komputa tisinga bvise. Iyi sleeve yemhando inowanikwa pa mutengo we6,99 euros.
Kindle Paperwhite Kesi
Chechitatu chekavha pane ino chinyorwa Iyo muenzaniso yeiyo 6-inch Kindle Paperwhite yezvizvarwa zvese. Saka zvisinei uine vhezheni ipi iwe, ichave inoenderana neyako kifaa. Icho chifukidzo chakagadzirwa chakaita zvokugadzirwa nedehwe ruvara tsvuku, waini tsvuku. Saka iri toni iri kunze kweyakajairika mune aya mavara erima, asi isina kunyanyisa kupenya. Kutenda nechinhu icho chakagadzirwa nacho, hachitsvedza kubva pamaoko.
Uyewo, imvura, ziya uye guruva rinodzinga pamusoro. Saka tsvina haizosvika pachigadzirwa chero nguva. Izvo zvinofanirwa kutaurwa zvakare kuti zviri nyore kwazvo kuchenesa, saka maererano nekuchengetedza hazvidi nguva yakawandisa. Tichakwanisa kushandisa yedu Paperwhite nguva dzese tichishandisa iyo butiro, pachokwadi, tinogona kudzima kana kudzima chishandiso nekungovhura kana kuvhara muvharo. Saka zviri nyore kushandisa. Iyi kesi iripo parizvino pa mutengo we10,99 euros.
Amazon Kindle Paperwhite Kesi
Inotevera pane iyo rondedzero ndeye imwe nyaya yeiyo Kindle Paperwhite, mune ayo mavhezheni kubva 2012 kusvika 2017. Saka vese vashandisi nechero yeiyi vhezheni yeReader inozivikanwa vanozogona kuishandisa pasina dambudziko. Mune ino kesi, inomira kunze kune dhizaini, iine mufananidzo wesherefu rakazara nemabhuku. Yakakodzera kwazvo tichifunga nezvechigadzirwa chakagadzirirwa iyi kesi. Iyo kesi yakagadzirirwa dhizaini yekugadzira, iyo inopa kuramba uye inochengetedza chishandiso nguva dzese.
Nenzira yekuti isu tidzivise kuti inogamurwa kana pane ivhu kana zvinwiwa zvinokuvadza. Chii chimwe, iri nyore kuchenesa chifukidzo, saka hatifanirwe kunetseka nezve chero tsvina. Iyo ine kuvhara kwemagineti kwakabatanidzwa mukati meganda, iyo inotibvumidza isu kuvhura nekuvhara iyo kesi nyore. Uye zvakare, tinogona kudzima kana kudzima iyo Kindle kana isu tavhura kana kuvhara iyo kesi. Iyi kesi iripo parizvino pa mutengo we15,99 euros.
Fintie chifukidziro che Kindle Oasis 2017
Muenzaniso wevashandisi vakatenga iyo Kindle Oasis ya2017, ndeyechizvarwa chechipfumbamwe cheAmazon zvishandiso. Takatarisana nekavha muvara rweruvara. Yakagadzirwa neyekugadzirwa nedehwe, iro rinoipa iro kuramba kukuru, pamwe nekudzivirira tsvina kana zvinwiwa kuti zvisvike pachigadzirwa. Iyo yakati kurei kesi pane mamwe mamodheru, asi iri huremu huremu. Saka zvekufambisa zviri nyore uye zvakagadzikana nguva dzese.
Iyo inotibvumidza isu kuverenga neruoko rumwe uye isu tinogona kupeta iyo kesi kuitira kuti iyo Kindle Oasis iri munzvimbo yakatwasuka. Zvakanaka kana tichifanira kunyora chimwe chinhu kana kuda kuverenga tisina kubata mudziyo mumaoko edu nguva dzese. Icho chifukidziro chemhando yepamusoro, chine chinodzivirira, chakasarudzika uye chakashongedzwa dhizaini. Sarudzo yaunoziva nayo kuti hausi kuzokundikana neimwe nzira. Izvozvi iri kuwanikwa ku Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
PIXNOR Nyaya yeAmazon Kindle Paperwhite
Nyaya inotevera pane yakanyorwa inogadzirwa neyeganda chairo. Iyo PIXNOR modhi yeiyo Kindle Paperwhite, iyo inonyanya kufarirwa modhi yeAmerican firm. Mune ino kesi isu takatarisana nenyaya inomira kunze kwayo dhizaini dhizaini nemafuta-dhiraini dhizaini. Saka iri sarudzo yakanaka kune vashandisi vari kutsvaga imwe kesi ine dhizaini yekutanga. Kunyangwe paakagadzirwa, nekuda kwerima rayo bhuruu, hachisi chakajeka kana chakashongedzwa.
Icho chivharo chakaonda, chiri nyore kuisa. Kunyangwe iri yakatetepa, inodzivirira mudziyo kubva pakurohwa nguva dzese. Zvakare zvinopesana netsvina kana zvinwiwa. Saka kuti iwe unonyatso kuchengetedzwa mune chero mhando mamiriro. Iyo ine iyo system inobvumidza chishandiso kubatidza iyo iyo nguva isu patinovhura iyo kesi. Uye zvakare, isu tinogona kuverenga neruoko rumwe tichishandisa iyo kesi, saka hatifanire kunetseka nezvayo kuti zvinoshungurudza kana tichishandisa iyo Kindle. Iyi sleeve inowanikwa pa Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Inodzivirira Nyaya yeMhando (8th Generation - 2016 Model)
Takapedza neizvi modhi yakagadzirirwa mamodheru echizvarwa chechisere cheAmazon eReaders. Takatarisana nesirivha-grey chifukidzo. Iyo kesi yakave yakagadzirirwa chete ino yechisere chizvarwa. Saka hazvienderane nemidziyo yezvimwe zvizvarwa. Iyo ine yakanaka dhizaini, iri nyore kwazvo kuisa, pamwe nekusagadzikana. Saka kuti ichengetedze chishandiso nguva dzese kubva kumapundu kana tsvina.
Kana tichifanira kubhadharisa iyo Kindle, hapana dambudziko, nekuti isu tinogona kuenderera tichishandisa iyo kesi nguva dzese pasina dambudziko. Zvekare, sezvataona mune mamwe mamodheru, mudziyo unovhurika patinovhura kadhi. Tinogona kuverenga neruoko rumwe chete takabata butiro, nekuti rakatetepa kwazvo, saka hazvizovhiringidze. Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kuzvichengeta muhomwe yako kana mubhegi nguva dzese. Izvozvi iri kuwanikwa ku mutengo we 24,99 euros paAmazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Best Kindle Covers
Casa del Libro inovandudza maReaders ayo, aya maTagus Iris matsva, Lira naDa Vinci